Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseBrazil zokuQhekeza » IBrazil yonwabile ngeeNtlanganiso e-Expo Dubai 2020
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBrazil zokuQhekeza • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
UMongameli we-Embratur (iArhente yaseBrazil yokuKhuthaza uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe), uCarlos Brito, kunye noMphathiswa wezoKhenketho, uGilson Machado Neto, bamkelwe yi-CEO ye-Emirates Airlines, u-Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum nge-3 ka-Okthobha ka-2021. Injongo yentlanganiso, ebibanjwe ngexesha lemisebenzi ye-Expo Dubai 2020, ibikukunyusa unxibelelwano lweenqwelomoya ukuya eBrazil ukusuka eDubai nakwezinye iindawo ze-Emirates, kugxilwe kwiAmazon nakumantla mpuma eBrazil.
Kukho iinqwelomoya eziyi-110 kwihlabathi liphela ezivela eSão Paulo ebonelelwe yi-Emirates.
Ukufika kwakhona kweenqwelomoya e-Emirates eBrazil, iBrazil izakwazisa ngemikhankaso yokuthengisa ukukhuthaza indawo ekuya kuyo eBrazil e-UAE nakwezinye iindawo eziphambili zamazwe aphesheya.
I-Expo Dubai 2020 inokuthatha inxaxheba kwamazwe e-190 kunye nabaphulaphuli abaqikelelweyo abamalunga nezigidi ezingama-25 zabantu ngalo lonke ixesha lomsitho.
Ukusuka eSão Paulo, i-Emirates okwangoku ibonelela ngeenqwelomoya ezili-110 kwihlabathi liphela. “Abo sele benethuba lokuba kwinqwelomoya e-Emirates bangaqinisekisa inzondelelo abaphatha ngayo abakhweli, ngeenqwelomoya zangoku kunye neenkonzo ezenza ukuba amava okubhabha abe mnandi kakhulu. Xa inkampani iqala ukubonelela ngakumbi ngeendawo zaseBrazil, siqinisekile ukuba ibango liya kuba phezulu. Izakukhulisa inani labakhenkethi bamazwe aphesheya abaza kufika elizweni lethu, ”utshilo uMphathiswa uGilson Machado Neto.
UMongameli we Umlinganisi kwaye uMphathiswa wezoKhenketho uxelele u-Sheikh Ahmed bin Seed Al Maktoum ukuba iinqwelo-moya zase Emirates ziseza kufika eBrazil, iBrazil izakuphehlelela amaphulo entengiso ukukhuthaza iindawo eziya e-Brazil e-United Arab Emirates nakwezinye iindawo eziphambili zehlabathi. "Utyalo-mali lwethu lokufaka iimveliso zaseBrazil kunye neendawo eziya kuthi zijolise kwizenzo zokwakha ubudlelwane kunye norhwebo lwasekhaya, olufana noqeqesho, itafile zeshishini, iindwendwe, ukongeza kwizenzo zoluntu lokugqibela," ucacisile umphathiswa.
Kumsitho weBrazil Pavilion e-Expo Dubai 2020, uMongameli we-Embratur, uCarlos Brito, ubalule ukubaluleka kokuthatha inxaxheba kweBrazil kwiminyhadala efana ne-Expo Dubai. “Ukunyuselwa kwelizwe lethu phesheya kubaluleke ngakumbi kule meko yokonyuka kogonyo kunye nokubuyela ngokuthe ngcembe kohambo. Umhlaba udinga kwaye kufanelekile ukuba ulwazi ukhenketho lwethu, ”utshilo. Phakathi kwemisebenzi ecetywe ngu-Embratur kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho kulwamkelo lokwamkela iindwendwe, iminyhadala yenkcubeko, imiboniso enemifanekiso kunye nemisebenzi yezandla, umculo kunye nomdaniso oqhelekileyo kuyo yonke imimandla yaseBrazil. Ukongeza, u-Embratur ucwangcisa nemisebenzi yamava e-brand ukwandisa intsebenzo kunye neendwendwe kwaye uya kuhambisa izixhobo zokwazisa.
UMongameli we-Embratur Carlos Brito
UMongameli we-Embratur kunye noMphathiswa wezoKhenketho nabo bacwangcise iintlanganiso nabameli bamanye amazwe ngexesha loMboniso, kubandakanya ukubonisana no-Sekela-Nkulumbuso kunye noMphathiswa woPhuhliso lwezoQoqosho kunye neTekhnoloji, Zdravko Počivalšek, kunye no-Nobhala wezoKhenketho eSan Marino uFrederico Amati. Isivumelwano samazwe amabini phakathi kweBrazil neSlovenia kufuneka sisayinwe ngexesha lokuthatha inxaxheba kwe-Embratur kunye ne-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho kwi "Veki yaseBrazil," ebibanjwe phakathi kwe-9 ukuya kwi-15 kaNovemba, e-Expo Dubai 2020.
Ukhenketho lwaseBrazil lumelwe zizenzo ze-Embratur (i-Arhente yaseBrazil yoKhuthazo lwaMazwe ngaMazwe loKhenketho) e-Expo Dubai 2020. Kwizihlandlo ezibini, i-Arhente ithatha iindawo ezinomtsalane zaseBrazil kwi-United Arab Emirates: ekuvuleni, phakathi kuka-Okthobha 1 no-9. , nangexesha leVeki yaseBrazil, ukususela ngoNovemba 9-15. Egcinwe rhoqo kwiminyaka emihlanu kwaye ithathwa njengeyona nto ibalulekileyo kwihlabathi, iiWorld Expos zinokubaluleka okukhulu ekunikezelweni kwamazwe. Zijolise ikakhulu kuphuhliso kunye nasekwenziweni kweshishini. Imiselwe elinye ixesha kunyaka ophelileyo ngenxa yobhubhane we-COVID-19, I-Expo eDubai 2020, eyamiswa ngenxa ye-COVID-19 kwaye ibanjwe ukusuka nge-1 ka-Okthobha ka-2021 ukuya nge-31 ka-Matshi, ngo-2022, inokuthatha inxaxheba kwamazwe ayi-190 kunye nabaphulaphuli abaqikelelweyo malunga nabantu abazizigidi ezingama-25 kwisithuba seenyanga ezintandathu zomsitho.